HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
“Ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo.”—EKS. 19:6.
Inona no antony nanaovana ny fifaneken’ny Lalàna?
Inona no antony nanaovana ny fifanekena vaovao?
Inona no antony nanaovana ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana?
1, 2. Inona no fiarovana nilain’ny taranak’ilay vehivavy, ary nahoana?
TENA ilaina ilay faminaniana voalohany ao amin’ny Baiboly, mba hahafantarana ny fomba ahatanterahan’ny fikasan’i Jehovah. Hoy Andriamanitra rehefa nilaza an’ilay fampanantenana tany Edena: “Hataoko mifandrafy ianao [Satana] sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany.” Hanao ahoana ilay fifandrafiana? Hoy i Jehovah: “Hanorotoro ny lohanao [lohan’i Satana] izy io [ny taranak’ilay vehivavy], ary ianao kosa handratra azy eo amin’ny voditongony.” (Gen. 3:15) Tena hifandrafy ilay menarana sy ilay vehivavy, ka hanao izay ho afany i Satana mba hamongorana ny taranak’ilay vehivavy.
2 Tsy mahagaga raha niteny toy izao ny mpanao salamo rehefa nivavaka ho an’ny vahoakan’Andriamanitra: “Mitabataba ny fahavalonao, ary mampitraka ny lohany ireo mankahala mafy anao. Miray tetika mangingina mba hamelezana ny vahoakanao izy ireo, sady mikotrika zava-dratsy hanoherana an’ireo olona efa nafeninao. Hoy izy ireo: ‘Andao hofoanantsika tanteraka ny fireneny.’ ” (Sal. 83:2-4) Tsy maintsy narovana ny firazanan’ny taranak’ilay vehivavy, mba tsy ho fongotra sy tsy hifangaro amin’ny firazanana hafa. Nanao fifanarahana hafa i Jehovah mba hahavitana an’izany sy mba hahatanteraka ny fikasany.
FIFANEKENA NIARO AN’ILAY TARANAKA
3, 4. a) Oviana no nanomboka nanan-kery ny fifaneken’ny Lalàna, ary nanaiky hanao inona ny firenen’Israely tamin’izay? b) Natao hiarovana an’iza ny fifaneken’ny Lalàna?
3 Lasa an-tapitrisany ny taranak’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Nataon’i Jehovah lasa firenena izy ireo, dia ny firenen’Israely. Nanao fifanekena miavaka tamin’io firenena io i Jehovah tamin’ny alalan’i Mosesy, ka nanome ny Lalàna. Nanaiky hankatò an’io Lalàna io izy ireo. Hoy ny Baiboly: ‘Noraisin’i Mosesy ny bokin’ny fifanekena ka novakiny teo anatrehan’ny vahoaka. Dia hoy ireo: “Vonona hanao sy hankatò izay rehetra nolazain’i Jehovah izahay.” Koa noraisin’i Mosesy ny ra [avy amin’ireo omby natao sorona] ary nafafiny teny amin’ny vahoaka sady hoy izy: “Ity no ran’ny fifanekena nataon’i Jehovah taminareo, momba izany teny rehetra izany.”’—Eks. 24:3-8.
4 Nanomboka nanan-kery ny fifaneken’ny Lalàna tamin’ny 1513 T.K., tamin’ny Israely teo an-tendrombohitra Sinay. Lasa vahoaka voatokana ho an’Andriamanitra ilay firenena, noho io fifanekena io. I Jehovah no lasa ‘Mpitsara sy Mpanome lalàna ary Mpanjakan’izy ireo.’ (Isaia 33:22) Hita amin’ny tantaran’ny Israely hoe inona no mitranga rehefa arahina na tsy arahina ny fitsipik’Andriamanitra. Tsy navelan’ny Lalàna hanambady mpanompo sampy sy hanompo andriamani-kafa ny Israelita, mba hiarovana ny taranak’i Abrahama tsy hifangaro amin’ny firazanana hafa.—Eks. 20:4-6; 34:12-16.
5. a) Afaka ny ho lasa inona ny firenen’Israely, noho ilay fifaneken’ny Lalàna? b) Nahoana no nolavin’Andriamanitra ny Israely?
5 Nisy mpisorona notendrena teo amin’ny Israely, noho ilay fifaneken’ny Lalàna. Aloky ny zavatra ho avy, izay mbola tsara kokoa, izany. (Heb. 7:11; 10:1) Afaka ny ho “fanjaka-mpisorona” ilay firenena, noho io fifanekena io. Nila nankatò ny lalàn’i Jehovah izy ireo, mba hahazoany izany tombontsoa manokana izany. (Vakio ny Eksodosy 19:5, 6.) Tsy nankatò anefa izy ireo. Tsy faly izy ireo rehefa tonga ny Mesia, ilay voalohany amin’ny taranak’i Abrahama. Nolaviny ilay Mesia, ka nolavin’Andriamanitra izy ireo.
Tsy nankatò ny Israelita, nefa tsy midika izany hoe tsy nahavita ny asany ny Lalàna (Fehintsoratra 3-6)
6. Inona no nilana ny Lalàna?
6 Nivadika tamin’i Jehovah ny Israelita, ka tsy lasa fanjaka-mpisorona. Tsy midika anefa izany hoe nisy tsy nety tamin’ny Lalàna. Natao hiarovana an’ilay ‘taranaka’ ny Lalàna, sady nanampy ny olona hamantatra ny Mesia. Nahavita ny asany izy io rehefa tonga i Kristy ary fantatra hoe iza izy. Hoy ny Baiboly: “Kristy no faran’ny Lalàna.” (Rom. 10:4) Iza indray àry no ho lasa fanjaka-mpisorona? Nisy fifanarahana hafa nataon’i Jehovah, mba hisian’ny firenena vaovao iray.
LASA NISY FIRENENA VAOVAO IRAY
7. Inona no nolazain’i Jehovah tamin’ny alalan’i Jeremia?
7 Ela be talohan’ny nanafoanana ny fifaneken’ny Lalàna, dia efa nilaza tamin’ny alalan’i Jeremia mpaminany i Jehovah fa hanao “fifanekena vaovao” amin’ny firenen’Israely. (Vakio ny Jeremia 31:31-33.) Tsy toy ny fifaneken’ny Lalàna izy io. Noho izy io mantsy, dia afaka mahazo famelan-keloka ny olona na dia tsy manao sorona biby aza. Nahoana?
8, 9. a) Inona no vokatry ny ra nalatsak’i Jesosy? b) Inona no tombontsoa ananan’ireo nanao ny fifanekena vaovao? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
8 Nanao ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany i Jesosy taonjato maro tatỳ aoriana, izany hoe tamin’ny 14 Nisana taona 33. Niresaka tamin’ireo apostoliny 11 tsy nivadika izy tamin’izay. Hoy izy momba ny kaopy nisy ny divay: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao miorina amin’ny rako, izay halatsaka ho anareo.” (Lioka 22:20) Hoy izy araka ny fitantaran’i Matio: “Ity no rako, dia ‘ny ran’ny fifanekena’ izay halatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka.”—Mat. 26:27, 28.
9 Ny ra nalatsak’i Jesosy tamin’izy natao sorona no mampanan-kery ny fifanekena vaovao. Natao indray mandeha tsy miverina io sorona io, ary olona maro no mahazo famelan-keloka vokatr’izy io. Tsy anisan’ireo nanao ny fifanekena vaovao i Jesosy, satria tsy nisy ota tao aminy ka tsy nila famelan-keloka izy. Azon’Andriamanitra ampiasaina mba hahasoa ny taranak’i Adama kosa ny vidim-panavotana vokatr’ilay ra nalatsak’i Jesosy. Lasa azon’i Jehovah atsangana ho ‘zanany’ koa ny olona sasany tsy mivadika, rehefa hosorany fanahy masina. (Vakio ny Romanina 8:14-17.) Heverin’i Jehovah ho tsy misy ota izy ireo, ka azo lazaina hoe mitovy amin’i Jesosy. Lasa “mpiara-mandova amin’i Kristy” izy ireo ary manana ilay tombontsoa nafoin’ny firenen’Israely, dia ny ho “fanjaka-mpisorona.” Hoy ny apostoly Petera momba azy ireo: ‘Ianareo dia “firazanana voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, olona nataon’Andriamanitra ho fananany manokana, mba hanambaranareo hatraiza hatraiza ny hatsaran-toetran’ilay” niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga.’ (1 Pet. 2:9) Tena ilaina tokoa ny fifanekena vaovao! Afaka ny ho anisan’ny taranak’i Abrahama koa ireo mpianatr’i Jesosy, noho io fifanekena io.
NANOMBOKA NANAN-KERY NY FIFANEKENA VAOVAO
10. Oviana ny fifanekena vaovao no nanomboka nanan-kery, ary nahoana?
10 Oviana ny fifanekena vaovao no nanomboka nanan-kery? Tsy tamin’i Jesosy niresaka an’ilay izy, ny alina talohan’ny nahafatesany. Tsy hanan-kery mantsy ny fifanekena vaovao raha tsy mandatsaka ny rany i Jesosy, ary avy eo manome an’i Jehovah ny vidim-panavotana vokatr’ilay ra nalatsany. Tokony handrotsahana ny fanahy masina koa aloha ireo “mpiara-mandova amin’i Kristy.” Tamin’ny Pentekosta taona 33 àry no nanomboka nanan-kery ny fifanekena vaovao, rehefa nandrotsahan’i Jesosy fanahy masina ireo mpianatra tsy nivadika.
11. Nahoana no afaka ny ho anisan’ny “Israelin’Andriamanitra” ny Jiosy sy ny hafa firenena, noho ilay fifanekena vaovao? Firy no nanaovana an’io fifanekena io?
11 Marina fa toy ny hoe efa “lany andro” ny fifaneken’ny Lalàna, rehefa nilaza tamin’ny alalan’i Jeremia i Jehovah fa hanao fifanekena vaovao amin’ny Israely. Tsy nifarana anefa izy io raha tsy efa nanan-kery ny fifanekena vaovao. (Heb. 8:13) Lasa nitovy ny fiheveran’i Jehovah ny Jiosy sy ny hafa firenena tsy voafora, rehefa nanan-kery ny fifanekena vaovao. “Voafora fo” mantsy izy ireo “ka ny fanahy no namorana azy, fa tsy ny fehezan-dalàna an-tsoratra.” (Rom. 2:29) Nataon’i Jehovah ‘tao an-tsain’izy ireo ny lalàny sady nosoratany tao am-pony’ rehefa nanao ny fifanekena vaovao izy. (Heb. 8:10) Miisa 144 000 ny voahosotra nanaovan’i Jehovah an’io fifanekena io. Antsoina hoe “Israelin’Andriamanitra” io firenena vaovao io.—Gal. 6:16; Apok. 14:1, 4.
12. Inona no tsy mampitovy ny fifaneken’ny Lalàna sy ny fifanekena vaovao?
12 Inona no tsy mampitovy ny fifaneken’ny Lalàna sy ny fifanekena vaovao? I Jehovah sy ny firenen’Israely no nanao ny fifaneken’ny Lalàna, fa i Jehovah no nanao ny fifanekena vaovao tamin’ny “Israelin’Andriamanitra.” I Mosesy no mpanelanelana tamin’ilay fifanekena taloha, fa i Jesosy kosa no mpanelanelana amin’ilay vaovao. Ram-biby no nampanan-kery ny fifaneken’ny Lalàna, fa ny ra nalatsak’i Jesosy kosa no nampanan-kery ny fifanekena vaovao. I Mosesy no nitarika ny firenen’Israely tamin’izy ireo teo ambany fifaneken’ny Lalàna. I Jesosy, Lohan’ny fiangonana, kosa no mitarika an’ireo ao amin’ny fifanekena vaovao.—Efes. 1:22.
13, 14. a) Inona no ifandraisan’ny fifanekena vaovao amin’ilay Fanjakana? b) Inona no ilaina mba ho afaka hiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra ny “Israelin’Andriamanitra”?
13 Inona no ifandraisan’ny fifanekena vaovao amin’ilay Fanjakana? Noho izy io dia lasa nisy firenena masina iray, izay manana tombontsoa ho mpanjaka sy mpisorona ao amin’ilay Fanjakana any an-danitra. Anisan’ilay taranak’i Abrahama koa io firenena io. (Gal. 3:29) Manamafy an’ilay fifanekena tamin’i Abrahama àry ny fifanekena vaovao.
14 Lasa nisy ny “Israelin’Andriamanitra” noho ilay fifanekena vaovao. Io fifanekena io koa no mahatonga an’ireo voahosotra ho “mpiara-mandova amin’i Kristy.” Mbola mila fifanarahana hafa anefa, vao ho afaka ny ho mpanjaka sy mpisorona miaraka amin’i Jesosy any an-danitra izy ireo.
FIFANEKENA AHAFAHAN’NY OLON-KAFA HIARA-MANJAKA AMIN’I KRISTY
15. Inona no fifanekena nataon’i Jesosy tamin’ireo apostoliny tsy nivadika?
15 Nanao fifanekena tamin’ny mpianany tsy nivadika i Jesosy, rehefa avy nanao ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany. Antsoina hoe fifanekena ny amin’ilay Fanjakana izy io matetika. (Vakio ny Lioka 22:28-30.) Tsy mitovy amin’ireo fifanekena hafa izy io. I Jehovah mantsy no nanao an’ireo fifanekena ireo tamin’ny olon-kafa. I Jesosy kosa no nanao ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana tamin’ireo mpanara-dia azy voahosotra. Nilaza izy tamin’izay hoe “toy ny nanaovan’ny Raiko fifanekena tamiko.” Angamba izy te hiresaka an’ilay fifanekena nataon’i Jehovah taminy hoe ho ‘mpisorona mandrakizay tahaka an’i Melkizedeka’ izy.—Heb. 5:5, 6.
16. Inona no tombontsoa ananan’ny Kristianina voahosotra, noho ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana?
16 ‘Nifikitra tamin’i Jesosy tao anatin’ireo fitsapana nahazo azy’ ny apostoly 11 tsy nivadika. Nanome toky azy ireo ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana fa hiaraka amin’i Jesosy any an-danitra izy ireo, ary hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana mba ho mpanjaka sy mpisorona. Tsy izy 11 ihany anefa no hahazo izany tombontsoa izany. Niseho tamin’ny apostoly Jaona tao amin’ny fahitana i Jesosy, ary niteny hoe: “Izay mandresy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo amin’ny seza fiandrianako, tahaka ny nandreseko ka niarahako nipetraka tamin’ny Raiko teo amin’ny seza fiandrianany.” (Apok. 3:21) Atao amin’ireo Kristianina voahosotra 144 000 àry ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana. (Apok. 5:9, 10; 7:4) Io fifanekena io no antoka fa hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra izy ireo. Rehefa ampakarin’ny mpanjaka iray ho vadiny ny vehivavy iray, dia mety ho lasa mpiara-manjaka aminy. Toy izany ireo voahosotra. Antsoin’ny Soratra Masina hoe ampakarin’i Kristy izy ireo, na “virjiny madio” fofombadin’i Kristy.—Apok. 19:7, 8; 21:9; 2 Kor. 11:2.
17, 18. a) Fintino ny momba an’ireo fifanekena enina nodinihintsika. b) Nahoana no mafy orina ny finoantsika an’ilay Fanjakana?
17 Mifandray amin’ny lafiny lehibe iray na amin’ny lafiny maromaro amin’ilay Fanjakana ireo fifanekena nodinihintsika tato sy tao amin’ny lahatsoratra teo aloha. (Jereo ilay hoe “Ahoana no Hanatanterahan’Andriamanitra ny Fikasany?”) Tena mafy orina ilay Fanjakana noho ireny fifanarahana ireny. Afaka matoky tanteraka àry isika fa ny Fanjakan’ny Mesia no ampiasain’i Jehovah mba hanatanterahana ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona.—Apok. 11:15.
Hampiasa ny Fanjakan’ny Mesia i Jehovah mba hanatanterahana ny fikasany momba ny tany (Fehintsoratra 15-18)
18 Tsy misy isalasalana fa hitondra soa maharitra ho an’ny olombelona ny Fanjakan’Andriamanitra. Tena matoky isika fa izy io ihany no hamaha tanteraka ny olana mahazo ny olombelona. Aoka àry isika hazoto hitory momba an’io fitondrana io.—Mat. 24:14.
Hizara Hizara “Ho Fanjaka-mpisorona” Ianareo